Thola izifihla-buso eziyisithupha zale ntwasahlobo | Bezzia
USusana Garcia | 29/04/2021 20:00 | Ubuhle, Ukwelashwa kobuhle
El ukunakekelwa kwezinwele kuyinto eyisisekelo okufanele sikunake nsuku zonke. Njalo kufanele usebenzise imikhiqizo emihle kepha futhi singasebenzisa imaski enhle yezinwele ngezikhathi ezithile, ngoba ngaleyo ndlela sizofaka ukunakekelwa okwengeziwe ezinweleni zethu. Le ntwasahlobo singaba nezinwele ezinamanzi nezinhle, ezicwebezelayo nezinempilo uma sisebenzisa imaski efanele izinwele zethu.
I-Las izifihla-buso zezinwele zizokwenza izinwele zakho zithuthuke futhi ngokukhetha izithako Ngaleyo ndlela singabheka lezo ezilungele uhlobo lwethu lwezinwele. Amaski wemvelo esingawenza ekhaya mahle, ngoba sisebenzisa izithako ezingokwemvelo futhi ngasikhathi sinye sinakekela izinwele ngezinto ezilula.
1 Imaski yezinwele ezi-Frizzy
2 Izinwele zemaski zezinwele ezomile
3 Isifihla-buso sezinwele esinamafutha
4 Imaski yezinwele ezinhle
5 Isifihla buso sezinwele
6 Imaski yezinwele ezinemibala
Imaski yezinwele ezi-Frizzy
El izinwele ezi-frizzy ngokuvamile zinenkinga yokoma, ngakho-ke into esemqoka kuleli cala ukondla izinwele. Ukotapeya imvamisa uyisithako esihle saleli cala. Ngakho-ke kufanele sithole ukwatapheya ovuthiwe esingamamathisela ukuwusebenzisa ezinweleni. Le avokhado ingaxubaniswa namafutha omnqumo noma e-almond okuthambisa kakhulu ukuqeda i-frizz Ngemuva kokufaka imaski kufanele sigeze izinwele nge-shampoo enhle kepha sizobona ukuthi i-frizz inyamalala kanjani uma i-hydrated kahle.
Izinwele zemaski zezinwele ezomile
Izinwele ezomile nazo zingaba njalo usizakale ngezithako ezihlinzeka nge-hydration enkulu. Amafutha kakhukhunathi ahlanganisiwe namaqanda amhlophe alungile. Uwoyela kakhukhunathi uthambisa kakhulu futhi iqanda limhlophe lilula kepha liyasiza ukugcina izinwele zimanzi, ukuze ekugcineni izinwele zondliwe futhi ziyeke ukoma.
Isifihla-buso sezinwele esinamafutha
Amaski okuzenzela izinwele ezinamafutha ngokuvamile sebenzisa ijusi kalamula njalo, ngoba inamandla aphezulu we-astringent. Ungakwazi ukuxuba ulamula neqanda elimhlophe, okuyisithako esilula esengeza ukukhanya. Ezinwele ezinamafutha asikwazi ukusebenzisa izithako ezihlinzeka ngamafutha amaningi njengamafutha omnqumo, kodwa futhi ingaxubeka neyogathi ephuza kodwa engagcini. Yenza imaski bese ushiya isigamu sehora. Izinwele kufanele zigezwe njalo. ILamula lisiza ukulawula ukukhiqizwa kwamafutha kalula.
Imaski yezinwele ezinhle
I-Las ama-strawberry ayisithako esiphelele sezinwele eziswele amandla. Amaski ezinwele ezinhle kufanele anikeze amandla nevolumu. Sebenzisa ama-strawberry angachotshozwa enze unamathisela esengeza kuwo ufulawa wommbila. Amajikijolo afaka amandla ezinweleni futhi ufulawa wengeza ivolumu.
Isifihla buso sezinwele
El izinwele ezibuthuntu zingoma futhi zihehe, ngoba konke kuhlobene nefayibha engonakala. Kubalulekile ukondla nokuthambisa izinwele ngemikhiqizo ezisiza ukuthi zibukeke kangcono. Ukuze izinwele zikhanye kufanele sifake izikhupha zamaqanda kumaski. Iqanda lisiza ukuthola ukukhanya okuningi ku-fiber yezinwele. Ngakolunye uhlangothi, singaxuba isikhuphasha seqanda neyogathi, ngoba iyogathi inomsoco kakhulu ezinweleni futhi isiza ukuthi igcine i-hydration. Ngaphezu kwalokho, yizithako ezimbili ezitholakala kalula ekhishini futhi ezixubeka kalula ukuzisebenzisa ezinweleni.
Imaski yezinwele ezinemibala
Izinwele ezidayiwe zinenkinga enkulu yokuthi yomile futhi kwesinye isikhathi ilimele. I- uwoyela womnqumo uyisithako esikhulu futhi nezithako zemvelo azijwayele ukuhudula umbala. Ungangeza izikhupha zamaqanda ukondla izinwele futhi uzenze zibukeke zicwebezela futhi zibushelelezi.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ubuhle » Izimaski zezinwele ezi-6 zale ntwasahlobo